के हो डाउन सिन्ड्रोम ? बच्चालाई ‘डाउन सिन्ड्रोम’ भए/नभएको गर्भमै कसरी थाहा पाउने? - VOICE OF NEPAL
के हो डाउन सिन्ड्रोम ? बच्चालाई ‘डाउन सिन्ड्रोम’ भए/नभएको गर्भमै कसरी थाहा पाउने?
२७ चैत्र २०७५, बुधबार १२:१६ 224 ??? ???????
– डा नुतन शर्मा
वरिष्ठ स्त्री रोग तथा टेस्ट ट्यूब बेबी विशेषज्ञ
पूर्वसांसद गायत्री साहले फागुन २८ गते जन्माएको बच्चामा डाउन सिन्ड्रोम देखियो। उनले गर्भावस्थामा नियमित रूपमा मेडिसिटी अस्पतालका डाक्टरसँग चेकजाँच गराएको र उनीहरूले बच्चाको अवस्थाबारे केही नबताएकाले यस्तो बच्चा जन्मिएको बताएकी छन्। अस्पतालले डाउन सिन्ड्रोम भएका बच्चाको आजीवन औषधीउपचार गरिदिनुपर्ने माग राखेर उनले बच्चालाई अस्पतालमै छोडेकी छन्।
यो घटनापछि आममान्छेमा चासो बढेको छ-डाउन सिन्ड्रोम के हो? कसरी हुन्छ? र आमाको पेटभित्र हुँदा थाहा पाउन सकिन्छ कि सकिन्न?
हामीले यिनै प्रश्न वरिष्ठ स्त्री रोग तथा टेस्ट्युब बेबी विशेषज्ञ डाक्टर नुतन शर्मालाई सोधेका छौं।
१८ देखि २० सातामा यो रोग पत्ता लागिहाल्छ। ५ महिना नपुग्दै थाहा यस्तो भएको थाहा भए गर्भपतन गर्न पनि गाह्रो हुँदैन। यदि डाउन सिन्ड्रोम नै छ भने बढी समय हँदा पनि गर्भपतनमा जानुपर्छ।